Kismaayo News » Qodobadii maanta looga hadlay shirkii wasiirada Jubbaland + Sawirro
Qodobadii maanta looga hadlay shirkii wasiirada Jubbaland + Sawirro
Kn: Madaxweynaha Dowlada Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa Maanta 1 January Sanadka Cusub ee 2017 wax Golaha Xukuumada uu u jeediyay khudbada Sanad laha ah ee 2017.
Madaxweynahu wuxuu cadeeyay in amaan la isku halyn karo uu ka jiro deeganada Xorta ah ee Jubbaland isagoo hoosta ka xariiqay in taas lagu gaaray isku duubni Bulshada iyo Hay’adaha amaanka ah waxaana uu dadweynaha ku booriyay in Nabada ay ilaashadan oo ay Dowlada kala shaqeeyan.
Deeganada Gacanta Dowlada ka maan ajuus xusay in Sanadkan 2017 gacanta lage digi doono si loog faa’iideyo Bulshada khayraadka uu Dhulkaas leeyahay.
Madaxweynaha Dowlada Jubbaland ahna Taliyaha guud ee Ciidamada qalabka sida wuxuu sheegay in la tababaray oo la qalabeeyay qaybo badan oo kamid ah Ciidamada Darawiishta Jubbaland isla markana si toos ah u hawlgala Booliska iyo Hay’adaha kale ee amaanka gudaha ayuu Madaxweynahu xusay in Sanadkii tagay wax badan laga qabtay sidoö kalana Ciidamada qaranka ayuu sheegay in hawshoodiii ugu horaysay ee isku dhafka Kismaayo laga hirgaliyay taas oo uu sheegay in ay bogaadin mudan tahay.
“Anaga Diyaar waxaan u nahay in aan qaabilo dadka soo noqonaya base waxaan Dowlada Federaalka ah imo UNHCR isku maandhaafnay dadka lasoo celinayo oo aan nori inta aan lasso celin bal haloo diyaariyo Nolol ay kula qabsadaan dalka sida Waxbarasho, Caafimad, ico Shako abuur ma Aqbalayno in dad myna wax ka horaynin la iska soo daad gureeyo oo ay amid noqdaan boqolalka gudaha ku barakacay.
Musuqa ayuu Madxaweynahu sheegay in uu la dagaalami doono imago Hay’adaha Dowlada ku dhiiri galiyay in laga dheerado musuq maasuqa si hawlaha Dowladu ay sidii logo tala galaxy ugu Socdaan.
10) Hormarinta Dhaqaalaha, Kobcinta iyo Midaynta Dakhliga Dowlada.
Madaxweynaha Jubbaland Waxaa uu sheegay in hananka uruursananta Dhaqaalaha ay dada badan Xukuumadu galisay Sanadkii 2016 ka isla markana gullo la taban karo laga gaadhay waxaana uu carabaabay in hatanka uruursananta dhaqaalahu uu yahay arin wax badan ka badalaysa hananka Maaliyadeed ee Dowlada.
11) Dhismaha Gudiyada iyo Xafiisyada Madaxabanaan